Inta Badan Milateriga Kenya Oo Laga Saarayo Kismaayo (Yaa Badelaya?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Waxaa lagu wada in inta badan milateriga dowladda Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose laga saaro magaaladaas kadib markii ay dowladda Soomaaliya cabasho ka muujisay faragelin ay ku sameeyeen arrimaha gudaha.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada mileteriga Kenya oo aan magaciis la sheegin ayaa VOA u sheegay in Kenya ay ku wareejineyso waajibaadkii dhinaca amaaniga ee Kismaayo ciidamo ka socda dalka Sierra Leone, kuwaasoo sidoo kale la wareegaya hogaanka AMISOM ee Jubooyinka.
Sidoo kale, wuxuu xusay sarkaalkani in ciidamo ka socda dalka Burundi oo qeyb ka ah AMISOM loo diri doono magaalada Kismaayo.
Sarkaalkan Kneyanka ah ayaa sheegay in ku dhowaad 200 oo askari oo Kenyan ah ay ku hari doonaan magaalada dekedda leh ee Kismaayo.Sarkaalkani ma sheegin xilliga ciidamada Kenya laga daadgureynayo Kismaayo iyo sii joogaayaan magaalooyin kale oo Jubooyinka ah iyo inkale.
Ciidamada Burundin oo ka mid ahaaa ciidamada AMISOM ee ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa todobaadkii hore halkaas laga wareejiyey iyadoo booskooda ay ka galeen ciidamada Itoobiya oo ku biiray AMISOM.
Afhayeenka maamulka KMG ah ee JUBA C/naasir Seeraar ayaa todobaadkii hore warbaahinta u sheegay iney adkaan doonto in maamulkiisu la shaqeeyo ciidamo ajnabi ah oo aan aheyn Kenyan.
Maamulka Juba ayaa Kismaayo ka abaabulay debadbax ay sheegeen in lagu taageerayo joogista ciidamada Kenya ee Jubooyinka.
Ciidamadda Kenya ayaa galay Soomaaliya sanadkii 2011-kii si ay ula dagaallamaan Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inay weerarro iyo afduub ka geystay gudaha Kenya.